गुगल, फेसबुक र ट्विटरप्रति ट्रम्प किन क्रुद्ध
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गुगलमा खोजी गर्दा वाम झुकाव राख्ने खालको परिणामहरू मात्र धेरै देखिने भन्ने आरोप लगाएका छन्। तर त्यो आरोप सत्य नभएको गुगलले बताएको छ। ट्रम्पले गुगलमा खोज्दा देखाउने सामाग्रीहरू धाँधलीपूर्ण रहेको भन्दै त्यसबारे आफूले अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। गुगलले
‘भारतका महान छोरा’ पूर्व प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयी रहेनन्
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीको ९३ बर्षको उमेरमा निधन भएका छ । मृगौला रोग पीडित वाजपेयीको बिहीबार साझ दिल्लीस्थित अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्यूटमा निधन भएको हो । भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा सफल परमाणु परीक्षण गरेर विश्वमा ख्याती कमाएका वाजपेयी इमान्दार छवीका नेताका रुपमा परिचित
भारतको ७१ औं स्वतन्त्रता दिवसः प्रधानमन्त्री मोदीको नयाँ कार्यक्रम ‘आयुषमान भारत’ घोषणा
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ७१ औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित लालकिल्लामा राष्ट्रिय झन्डा (तिरङ्गा) फहराएका छन् । सो अवसरमा मोदीले ८२ मिनेट लामो सम्बोधन गर्दै आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गरे । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको चार वर्षको अवधिमा स्वच्छ भारत अभियान, मुद्रा
वाउ ! सूर्य छुने रकेट उड्यो
एजेन्सी। अमेरिकी अन्तरिक्ष अध्ययन संस्था (नासा)ले सूर्यको नजिकसम्म पुग्ने यान पठाएको छ । आइतबार बिहान ३ बजेर ३१ मिनेटजाँदा नासाले ‘पर्कर सोलार प्रोब रकेट’ त्यसतर्फ पठाएको बिबिसीले बताएको छ । एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकेट सूर्यको बाहिरी कोरोनासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकेट सूर्यको
न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम त्रुटीपूर्ण छ ?
काठमाडौँ । नेपाली युवा वैज्ञानिक राजकुमार थापाले न्युटनको चालसम्बन्धी तेस्रो नियममा त्रुटि रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्यता दिँदा समेत नेपाल सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो पोखेका छन् । बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । करिब दुई वर्ष अघि
‘नक्कली’ बन्ने होडबाजी
मानिसको शाररिक बनोट, अनुहार, रुप/रङ्ग फरक–फरक हुनु प्रकृतिको देन हो । संसारमा एकअर्कासँग अनुहार मिल्नु संयोग मात्र हो । तर,आधुनिक विज्ञानको ‘कृतिम सुन्दरता’ चमत्कार मानिने प्लाष्टिक सर्जरीले तपाईँ जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै बनाइदिन्छ । यसका लागि सेलिब्रेटी र फिल्म नगरीका कलाकारले त करोडौं
कथा कुरान प्रेमी हिन्दु परिवारको
धार्मिक आस्था र विश्वास भारतको जम्मुमा एउटा अवरोल हिन्दु परिवार छ । यो परिवारसँग करिब ५ हजार हस्तलिखित पाण्डुलिपी तथा ढाई सय क्यालीग्राफी छन् । अब यी सामग्रीको उत्तराधिकारी हुन् सुरेश । उनका हजुरबुवा आप्mना पितासँगै डोगरावंशका अन्तिम राजा हरिसिंहको दरबारमा जाने गर्दथे । राजा हरिसिंहले सन् १९५२ सम्म
एटीएममा पसेर मुसाले काटे लाखौं रुपैयाँ
भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा एउटा एटीएम बिग्रेपछि जाँच गर्न प्राविधिकहरू खटाइए। उक्त एटीएम खोलेपछि उनीहरू छक्क परे । किनभने भारु १२ लाखभन्दा बढी मूल्यका नोटहरू काटिएको अवस्थामा भेटिए । तीनसुकिया जिल्लास्थित स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाको सो एटीएममा पाँच सय र दुई हजार दरका ती नोटहरू मुसाले काटेको शङ्का
मैदानमा चम्किन्छन् ९५ बर्षे हजूर बा
खेलमा एउटा भनाई छ, ‘एकाग्रताले जित गन्तव्यसम्म पुर्याउछ ।’ स्कटल्याण्डका, ९५ वर्षीय ईस्टोन रोय; यी दुबै कुरामा पूर्ण विश्वस्त छन् । संसारका वृद्ध रग्बी यी खेलाडीको सफलताले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध ताका उनी २१ वर्षका थिए; रोयल एयर फोर्समा कार्यरत; पहिलोपटक रग्बीबारे थाहा पाउँदा । ‘उनीहरुलाई
विश्वकपः रोचक तथ्यहरू
आयोजक राष्ट्रलाई विश्वकपको पहिलो ट्रफी फुटबलको पहिलो विश्वकप प्रतियोगिता सन् १९३० मा उरुग्वेमा भएको थियो । यस प्रतियोगितामा १३ ओटा राष्ट्रले मात्र भाग लिएका थिए । दक्षिण अमेरिकाबाट ७, युरोपबाट ४ र उत्तर अमेरिकाबाट २ देश सहभागी थिए । प्रतियोगिताको फाईनलमा आयोजक राष्ट्र उरुग्वेले अर्जेटिनालाई ४–२
उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्थाले वाशिङटनको भ्रमणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दिएको निम्तो नेता किम जङ अनले स्वीकार गरेको बताएको छ । सिंगापुरमा मंगलबार दुई नेताबीच भएको शिखर बैठकका बेला ट्रम्पले भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । किमले पनि प्योङयाङको भ्रमण गर्न ट्रम्पलाई निम्तो दिएको
ट्रम्प–किम एक्काएक्लै भेट सम्पन्न, विश्व शान्ति छलफलको एजेण्डा
सिंगापुर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोग उनबीच सिंगापुरमा एक्लाएक्लै
‘पैसाले पैसा तान्छ’ भन्ने नेपाली उखानै छ । यसलाई चरितार्थ गरेका छन्, भारतका युवा व्यवसायी अनमोल अम्बानीले । विश्वकै धनाड्य अम्बानी परिवारका सदस्य उनी अनिल अम्बानीका जेठा छोरा हुन् । अम्बानी परिवारको अर्काे परिचय बनेको छ रिलायन्स ग्रुप । रिलाईन्स क्यापिटल, रिलाईन्स ईन्स्फ्रास्टक्चर, रिलायन्स पावर
जब नेहरू रिसले आगो भए...
नेहरूको रिस प्रसङ्ग बाडुंग सम्मलेनको हो, श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री सर जोन कोटलेवाला भाषण गर्दै थिए । बोल्दा बोल्दै अचानक उनले भने, ‘पोल्याण्ड, हंगेरी, बुल्गेरिया र रोमानिया जस्ता देशहरू सोभियत संघका उपनिवेश हुन्, जसरी एशिया र अफ्रिकाका मुलुकहरूमा पश्चिमी उपनिवेश छ ।’ कोटलेवालाको यस्तो टिप्पणी सुनेपछि,
‘किमलाई ह्वाइट हाउस भ्रमणको निम्तो दिनसक्छु’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सिङ्गापुरमा अर्को साता हुने शिखर बैठक राम्ररी अघि बढे आफूले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ अनलाई ह्वाइट हाउसको भ्रमणमा बोलाउनसक्ने बताएका छन्। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेसँग जुन १२ मा हुने शिखर बैठकबारे छलफल गरेपछि उनले त्यस्तो संकेत दिएका हुन्। उनले कोरियाली
‘आईरन लेडी’ इन्दिरा
फिरोज घान्दी फिरोज जाँहगीर घान्दी गुजराती पारसी थिए भने ईन्दिरा कश्मिरी ब्राह्मण परिवारकी थिईन् । उनको पुरा नाम ईन्दिरा ‘प्रियदर्शिनी’ नेहरु थियो । ‘प्रियदर्शिनी’ उपनाम उनलाई महान साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरले दिएका थिए । उत्तर प्रदेशको इलाहावाद, अयोध्या क्षेत्रमा जवाहरलाल नेहरु परिवारप्रति
विश्वका यी १० युवा अर्बपति कसको सम्पत्ति कति ?
चर्चित अमेरिकी पत्रिका फोब्सले हरेक वर्षमा झैं यसपल्ट पनि संसारका धनाढ्य व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरेको छ । उसको सूचीमा विश्वभर १८ सय १५ जना अर्बपति दर्ज भएका छन् । अहिले विश्वको जनसंख्या सात अर्ब ५० लाख पुगेको छ । यी अर्बपतिको एउटैसँग विश्वका कतिपय मुलुकको बार्षिक बजेट भन्दा वढी सम्पत्ति छ । पत्रिकाका
सुदूरपश्चिम सास्कृतिक धार्मिक हिसाबले मात्रै नभई प्राकृतिक सम्पदामा पनि उत्तिकै धनी छ । यो क्षेत्र औषधियुक्त जडिबुटी तथा फलफुलको भण्डार पनि हो । यहाँ पाइने काफल, तिमला, बेडु, अमला, घाङर, पाङर, मेल, किम्मु, गुल्लर लगायत सयौँ पौष्टिक फल तथा जडीबुटीको प्रचार–प्रसार नहुँदा त्यसबाट आर्थिक उपार्जन हुन सकिरहेको
अमेरिकी गुप्तचर निकायमा पहिलो महिला निर्देशक
अमेरिकी गुप्तर निकाय सीआइएमा पहिलो महिला निर्देशकका रूपमा जिना ह्यास्पेललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको सिफारीस अमेरिकी सिनेटले अनुमोदन गरेको छ। सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएका आतंकवादी हमलापछि गुप्तचर निकायले चलाएको विवादास्पद केरकार तथा सोधपूछ कार्यक्रममा उनको पनि भूमिका रहेको
के हो जेरुसलेम विवाद ?
अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिकाले तेल अभिभस्थित उसको दूतावास जेरुसलेम सार्ने केही घण्टाअघि इजरेली फौजले गाजामा एकजना १२ वर्षीय बालकसहित कम्तीमा ५२ जना प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हानी मारिदिएको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। नयाँ अमेरिकी दूतावासको उद्घाटन समारोह हुनुअघि इजरेल र गाजा सीमा क्षेत्रमा
फोर्ब्सले सार्वजनिक ग¥यो विश्वका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सूची, चिनियाँ राष्ट्रपति सी विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति
काठमाडौँ । फोर्ब्सले यस वर्ष सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई चित्रित गरेको छ । पत्रिकाले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सूचीमा यस वर्ष सी सन् २०१८ को लागि पहिलो नम्बरमा परेका हुन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका सीको ‘नयाँ युगको
किन बर्दीमै भीख माग्ने अनुमति चाहन्छन् यी मुम्बई प्रहरी ?
आमसर्वधारणको सुरक्षाका लागि खट्ने प्रहरीले नै भीख माग्नु पर्ने अवस्था आएपछि अरुको के हाल होला ? भारतको मुम्बइ प्रहरी सेवामा कार्यरत एक हवल्दार खर्च टार्ने अरु उपाय नभएपछि बर्दीमा भीख माग्ने अुनमति चाहन्छन् । महाराष्ट्र प्रहरीका एक हवल्दारले मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फङवीस र मुम्बई पुलिस कमिशनर दत्ता
'इस्लामिक स्टेटको' चक्कु हमलामा एकको मृत्यु
फ्रान्स । फ्रान्सका अभियोजनकर्ताहरूले मध्य प्यारिसमा बाटोमा हिँडिरहेका मानिसहरूमाथि एक व्यक्तिले धारिलो हतियारले आक्रमण गरेको घटनाबारे आतंकवादसम्बन्धी अनुसन्धान थालेका छन्। पर्यटकहरूको चहलपहल हुने प्यारिसको ओपेरा जिल्लामा उक्त घटना भएको हो। स्थानीय समय अनुसार राति साढे नौ बजे भएको घटनापछि प्रहरीले
ट्रम्प–किमबीच शिखरवार्ता जुन महिनामा हुने
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जङ–अनसँग आफूले जुन १२ मा सिंगापुरमा भेट्न लागेको बताएका छन्। उत्तर कोरियाली नियन्त्रणबाट मुक्त भएका तीन अमेरिकी बन्दीलाई आफूले स्वागत गरेको केही घण्टामा ट्रम्पले ट्वीट लेखेर त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्। किमलाई भेट्ने निम्तो
मलेशियामा महाथिरको ऐतिहासिक जित
मलेशिया । मलेशियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले सन् १९५७ देखि निरन्तर सत्तामा रहेको दललाई आम चुनावमा हराउँदै सानदार राजनीतिक पुनरागमन गरेका छन् । ९२ वर्षका डाक्टर महाथिरले कुनै समयमा वर्षौ आफूले नेतृत्व गरेको बारिसन नाशिओनल पार्टी र आँफैले हुर्काएका नेता नजिब रजाकलाई चुनौती दिन राजनीतिबाट
डोनाल्ड ट्रम्पलाई यस्तो धम्की
एजेन्सी । रानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले आइतबार यदि आफ्ना अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पले तेहराजसंगको आणविक समझौताबाट पछि नहटेको खण्डमा अमेरिकाले एैतिहासिक दुख मनाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले आगामी १२ मेको आन्तिम म्यादसम्ममा अमेरिकालाई सो सम्झौताबाट अलग्याउने होकी भनी सोचिरहेको
फ्रान्सद्वारा ट्रम्पको भनाइको विरोध
बीबीसी । मानिसहरूलाई बन्दुक राख्न दिएको भए सन् २०१५ को प्यारिस हमलालाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको भनाइप्रति फ्रान्सले विरोध जनाएको छ । प्यारिस हमलामा १ सय ३० जना मारिएका थिए। फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको दावीलाई खारेज गरेको छ र पीडितहरूको सम्झनाको सम्मान गर्न
‘इरानसँगको सम्झौता खारेज भए युद्ध’
बीबीसी । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई इरानको परमाणु क्षमता सीमित पार्ने उद्देश्य लिएको अन्तराष्ट्रिय सम्झौताबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले मध्यपूर्व 'खतरनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र उक्त सम्झौता संरक्षण गर्न नसकिए ‘युद्धको
किमका ५ रोचक तथ्य
अहिले विश्वको ध्यान कि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङले खिचेको छ, कि त शक्तिशाली शासकहरु ट्रम्प, पुटिन, सिले । संसारभरका मिडिया तिनै शक्तिशाली अनुहार जता दौडिन्छन् जे भन्छन् त्यसैलाई समाचार बनाउन अभ्यस्त छन् । पछिल्लो समय निकै आणविक हातहतियारका कारण चर्चामा रहेका उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोंङ
फेसबुक विवाद : अमेरिकी सांसदको मार्क जुकरबर्गलाई प्रश्नै प्रश्न
आठ करोड ७० लाख प्रयोगकर्ताका डाटा चोरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकी कंग्रेसले फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख मार्क जुकरबर्गलाई गत सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिन प्रश्न सोध्यो । उनलाई १० घन्टासम्म सिनेट र कंग्रेसमा राखेर प्रश्न सोधिएको थियो । जुकरबर्गलाई सिनेटरहरूले ६ सयभन्दा बढी प्रश्न सोधेका थिए । ती फेसबुक
कुल पोष्ट : 126